अन्तिम टेस्ट अगाडि ठुलो संकटमा भारतिय टिम, अब के होला ? |
अन्तिम टेस्ट अगाडि ठुलो संकटमा भारतिय टिम, अब के होला ?
२०७७, १ माघ बिहीबार ११:०२ January 14, 2021 ताजा खबरक्रिकेट
काठमाडौँ । अस्ट्रेलिया टुरमा रहेको भारतीय क्रिकेट टिमलाई खेलाडीको इन्जुरीले समस्यामा पारेको छ । यसैक्रममा १५ जनवरीदेखि शुरु हुने चौथो टेस्ट अगाडी तिब्रगतिका बलर जसप्रित बुमराह घाइते भएका छन् ।
बुमराह घाइतेभएपछि ब्रिसबेनमा हुने चौथो टेस्टबाट बाहिरएका छन् । अब बुमराहको ठाउमा श्रदुल ठाकुर या टी नटराजनले मौका पाउन सक्ने बताइएको छ यस अघि भारतका अस्ट्रेलिया टुरमा गएका खेलाडी घाइते हुदै टिमबाट बाहिरएपछि भारतको संकट बढेको छ ।
बमराह भन्दा अगाडी तेस्रो टेस्टमा अलराउण्डर रविन्द्र जडेजा घाइते भएपछि उनले पनि चौथो टेस्ट गुमाएका छन् । त्यस्तै ब्याट्सम्यान हनुमा विहारी इन्जुरीका बीचमै तेस्रो टेस्ट खेलेर भारतलाई हारबाट बचाएका थिए । उनको चौथो टेस्ट खेल्ने नखेल्ने अझै निश्चित भएको छैन । त्यस्तै बलरहरु मोहमद सामी, उमेश यादव यसअघि नै घाइते भएर टिमबाट बाहिर भएका छन् ।
अस्ट्रेलियाविरुद्धको तेस्रो टेस्टलाई हारबाट जोगाएपछि भारतीय क्रिकेटका कप्तान अजिन्क्या रहानेले आफ्नो टोलीको तारिफ गर्दै बराबरी पनि जित सरह भएको टिप्पणी गरेका छन् । ओपनरद्वय शुबमन गिल र रोहित शर्मालाई चौथो दिन नै गुमाउँदा ९८–२ को स्थितिबाट सोमबारको खेल सुरु गरेको भारतले विश्वका उत्कृष्ट बलिङ आक्रमणविरुद्ध तेस्रो टेस्टमा बराबरीको नतिजा निकालेको थियो। ओभर नाइट क्रिकेटमा सोमबार थप रन बटुल्न असफल रहाने ४ रनमै पवेलियन फर्किएका थिए, जहाँ उनको टोलीलाई जितका लागि ३ सय ९ रन आवश्यक थियो। सोमबार दोस्रो ओभर नसकिँदै कप्तान रहाने आउट भएपछि रेकर्ड योगफल पछ्याएको भारतको सुरुआत राम्रो हुन सकेन।
यद्यपि, रिसब पन्तले ९७ रन र चेतेश्वर पुजराले ७७ रन बनाउँदै भारतको आशा जगाए। यो जोडी आउट भएपछि हनुमा बिहारीले चोटका बाबजुत उपचार गराउँदै इनिङलाई जोगाए। रविचन्द्रन अश्विनले पनि घरेलु टोलीको तीव्र बलिङमा समालिँदै भारतमाथि संकट पर्न दिएनन्। बिहारीले १६१ बल खेल्दा २३ रन र अश्विनले ३९ रनको महत्वपूर्ण योगदान दिए।